Kuboshwe abane ngokuphanga amabhizinisi – LIVE Express
Kugcine kubashele abalisa abane abasolwa ngokuphanga amabhizinisi ezigamekweni ezimbili ezahlukene e-Phoenix, ngaphandle kweTheku.
U-Sajid Mehomood (42),u-Mehboob Afzal (27), u-Habib Asghas (26) kanye no-Majid Rafiq (25) kuthiwa bahlasele e-tuck shop eku-Acer Street, eMainpark Place sebehlome beyizingovolo ngezikhathi zabo-16:00 ntambama.
Ngokusho kobe yisisulu sokuqala kulezi zigameko noneminyaka engama-27 uthi indaba yaqala ngokuthi athenge le-tuck shop komunye walaba solwa esikhathini esingaphambilini. Ekuhambeni kwesikhathi kuthiwa umsolwa uvukwe umona ngoba esebona ibhizinisi liqhuba kahle.
Kuthiwa ugcine ehlulekile ukuzibamba wagasela kule-tuck shop esehamba nabanye abalisa abathathu nalapho efike wasabisa umnikazi webhizinisi emukhombe nangommese. Babe sebezitamuzela, bathatha yonke impahla edayisayo okubalwa i-airtime, ugwayi kanye nemali, bakulayisha emotweni maqede bakhala bemuka.
Ngosuku olufanayo kuthiwa bakuphindile futhi lokho ngezikhathi zabo-20:00 ebusuku. Kuthiwa laba baphinde bahlasela elinye ibhizinisi eliku-Acara Street, e-Stonebridge behlome ngobhushu, izinduku kanye nemimmese.
Kuthiwa basabise umnikazi webhizinisi maqede bamuphushela eceleni. Emva kwalokho babe sebezitapela emalini, ugwayi kanye ne-airtime maqede badla phansi.
Isisulu kulesi sigameko sesibili kuthiwa sikwazile ukukhomba abasolwa nokuholele ekutheni bakhalelwe amasango kaSigonyela mhla zingama-30 ku-Januwari 2016. Babe sebevela enkantolo mhla lulunye kuFebhuwari 2016. Kudwa-ke basazoke bathi ukuhlala endlini emnyama kuze kube umhla ziyi-9 kuFebhuwari 2016
Khonamanjalo uKhomishana wamaphoyisa esifundazweni iKwaZulu Natali, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni, ukushayele ihlombe ukuboshwa kwalaba solwa wathi vele kuwumsebenzi wabo njengamaphoyisa ukuvikela umphakathi.